Vashandi veHurumende Votatarika Kupa Hurumende Zvinodiwa Kuti Vanzi Vari paBasa
Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers’ Union of Zimbabwe, ARTUZ, rinoti varairidzi vakawanda pamwe nevamwe vashandi vehurumende vachakundikana kunge vaendesa zvinokwanisa kuti vazivikanwe sevashandi vehurumende kana kuti biometrics pachapera nguva yatarwa nehurumende.
ARTUZ inoti izvi zviri kukonzerwa nekushaya kwevashandi vakawanda mari dzekufambisa kuenda kumahofisi ari kunyoresa vanhu.
Mutungamiri weARTUZ VaObert Masaraure vanoti gore rapera, sangano ravo rakanga rakumbira kuhurumende kuti iise vashandi vanopinda muzvikoro ichitora humbowo hwemunhu uhwu, asi hurumende chayakangoita kuwedzera nguva yechirongwa ichi.
Bepanhau reHerald rinoti gwaro rakanyorwa nemunyori mubazi rezvevashandi nemabasa, VaJonathan Wutawunashe richienda kuvashandi vehurumende vese, rakatara musi wa 28 mwedzi uno waKukadzi sezuva rekupedzisira kuti vashandi vese vehurumende vange vanyoresa.
Gwaro iri rinonzi riri kuti anenge asina kunyoresa zvakare pasi pechirongwa ichi haazokwanisa kuramba achitambiriswa muhoro wake. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende pachikumbiro chekuti iise vashandi muzvikoro vanonyora varairidzi.